Shiinaha DP-32 Soo-saarista Kaamirada Kuleylka ee Kuleylka ah iyo Warshad | Dianyang
kaamerada kuleylka gacanta ee infrared
PCBA Circuit guddiga falanqeeye kaamerada
camerra sawir-qaade kuleylka ku shaqeeya ee jirka aadanaha
module imaraatiyeedka kuleylka ee infrared
Baaxadda kuleylka kulaylka ee infrared
kamarad kale oo sawir qaade ah
DYT Wareegga Wareegga Heer-kulka ...
nooca-256 infrared kaamerada c ...
CA10 PCB Circuit guddiga ther ...
DP-32 Muuqaalka Kuleylka Kuleylka ah ...
DR-23 sawirka kuleylka ee infrared ...
Kameradda Sawirka Dabiiciga ah ee DP-32
DP-32 Infrared Thermal Imager waa sawir-qaade kuleyl sare leh, kaas oo cabbiri kara hareeraha sheyga bartilmaameedka khadka tooska ah ee waqtiga dhabta ah, soosaarida fiidiyoowga muuqaalka kuleylka iyo hubi xaaladda ka-weyn. La soco barnaamijyada kaladuwan ee iswaafajinta ee kaladuwan, waxay ku habboonaan kartaa habab adeegsiyo kala duwan (sida cabbirka aaladda qalabka korontada, digniinta dabka, cabirka hawo jirka aadanaha iyo baaritaanka) Dukumiintigaan wuxuu kaliya soo bandhigayaa qaababka isticmaalka cabbirka iyo tijaabinta jirka.
DP-32 waxay shaqeysaa awoodda saadka ee USB waxayna gudbisaa xogta waxaa lagu dhammeeyaa hal xarig oo USB ah, iyadoo la ogaanayo hawlgal ku habboon oo deg deg ah.
Iyada oo ku saleysan dejinta macaamiisha goobta, DP-32 waxay fulin kartaa magdhow isbeddel ah oo ku kala duwan isbeddelada deegaanka si ikhtiyaari ah iyada oo aan si joogto ah loo hagaajin qof madow iyo xakameynta qaladka inta u dhexeysa ± 0.3 ° C (± 0.54 ° F).
Kaameradda sawir-qaadaha kuleylka ah ayaa si otomaatig ah u cabbiri karta jirka bini'aadamka iyada oo aan wax qaabeyn ah loo samayn, dhib malahan wajiga ama la'aan.
Dadku waxay marayaan iyagoo aan istaagin, nidaamku wuxuu ogaan doonaa heerkulka jirka.
Iyada oo qof madow si otomaatig ah loogu cabbiro kaameradda sawir-qaadaha kuleylka, oo si buuxda ugu hoggaansan shuruudaha FDA.
The temperature accuracy <+/-0.3°C.
Ethernet iyo HDMI dekedda ku saleysan SDK; macaamiisha ayaa horumarin kara barnaamij u gaar ah barnaamijka.
Otomaatik ah ayaa dadka ka qaata sawirro isla markaana duuba fiidiyowyada digniinta ah marka heerkulka dadku ka sarreeyo marinka.
Sawirada digniinta iyo fiidiyowyada si otomaatig ah ayaa loogu keydin karaa diskka USB-ga ah.
Taageer qaababka muuqaalka muuqda ama isugeynta.
Qeexitaanka DP-32 waa sida soo socota:
Sawirka kuleylka ee infrared Qaraarka 320x240
Qaybta mawjada jawaabta 8-14um
Heerka jir 9Hz
NETD 70mK @ 25 ° C (77 ° F)
Xagasha garoonka 34.4 oo jiif ah, 25.8 oo taagan
Baaxadda cabirka -10 ° C - 330 ° C (14 ° F-626 ° F)
Saxnaanta cabirka Jirka aadanaha, algorithm magdhowga duufaanka wuxuu gaari karaa ± 0.3 ° C (± 0.54 ° F)
Cabbiraad Aqoonsiga wajiga aadanaha, cabirka guud.
Midabada midabka leh Whitehot, Qaanso-roobaad, Birta, Tyrian.
Guud Isdhaxgalka Awood bixinta iyo gudbinta xogta iyada oo loo marayo heerka Micro USB 2.0
Qalliinka hawlgalka -20 ° C (-4 ° F) ~ + 60 ° C (+ 140 ° F) (oo looga baahan yahay cabirka saxda ah ee jirka bini'aadamka, waxaa lagugula talinayaa inaad ku isticmaasho heerkulka 10 ° C (50 ° F) ~ 30 ° C (+ 86 ° C))
Kaydinta kuleylka -40 ° C (-40 ° F) - + 85 ° C (+ 185 ° F)
Biyo-la’aan iyo boodh-diid IP54
Cabir 129mm * 73mm * 61mm (L * W * H)
Miisaanka saafiga ah 295g
Kaydinta sawirka JPG, PNG, BMP.
Rakibaadda ”Toddobaadka caadiga ah ee loo yaqaan 'tripod trip ama pan-janjeerin' ayaa la qaatay, wadar ahaan 4 godad.
Software Muujinta kuleylka Raadinta duufaanka sare ee aagga cabbirka ayaa la dejin karaa.
Alaarmiga Waxaa loo helaa digniinta ka soo baxda jaangooyada marinka sare, waa la maqli karaa alaarmiga, sawir-qaadista sawirada alaarmiga isla mar ahaantaana la keydin karaa.
Magdhawga kuleylka Isticmaalayaashu waxay dejin karaan magdhow heerkulka sida ku xusan jawiga
Sawir Gacan ku hoos furitaanka, si otomaatig ah cabsi
Daruuraha Internetka la soo galiyo Loo habeeyay iyadoo loo eegayo shuruudaha daruurta
Kaliya hal fiilo USB ah ayaa loo baahan yahay si loogu xiro mashiinka sawirka kuleylka iyo kombiyuutarka. Qaabka isku xirka iyo qaabka isdhexgalka ayaa lagu muujiyay jaantuska soo socda
Waxaa loo soo jeediyay in lagu socodsiiyo nidaamka ka hooseeya Microsoft Windows 10 x64, interface-ka waa sida soo socota:
Sawir-waqtiga dhabta ah
Kaamiradda ku xulo sanduuqa cas ee shaxanka hoose, guji "Ciyaar", sawirka hadda jira ee kamaradduna waxaa laga soo bandhigi doonaa midigta. Dhagsii "Jooji" si aad u joojiso soo bandhigida sawirka waqtiga-dhabta ah. Guji "Sawir" si aad u doorato "Faylka" oo aad u kaydiso sawirka.
Riix astaanta weyn ee midigta kore ee sawirka, sawirka iyo qiimaha heerkulka la cabbiray waa weynaanayaa, mar labaadna taabo si sax ah u beddel qaabkii caadiga ahaa.
DP-32 sawir-qaadaha kuleylka ee infrared wuxuu bixiyaa 2 qaab oo loogu talagalay cabbirka heerkulka,
Aqoonsiga wajiga aadanaha
Habka cabbirka guud
Macaamiisha ayaa beddeli kara qaabka qaabeynta ee astaanta geeska kore ee midig ee software-ka
Habka cabbiraada asalka ah ee softiweerku waa aqoonsiga wajiga aadanaha, marka softiweerku aqoonsado wajiga aadanaha, waxaa jiri doona leydi cagaaran oo muujiya heerkulka. Fadlan ha u labisan koofiyad, muraayadaha indhaha si aad u daboosho wejiga.
Midabada xulashada ikhtiyaariga ah waa sida soo socota:
Waxaa loo heli karaa alaarmiga digniinta iyo dhawaqa dhawaaqa, iyo keydinta otomaatiga ah ee isla markiiba laga qaado markay qaylodhaanta dhacdo.
Markay duufaanku ka gudubto xadka, sanduuqa cabbiraadda kuleylka aagga ayaa isu beddelaya casaan si loo siiyo digniin.
Dhagsii ellipsis ka dib erayga "Alarm Voice" si aad u xulato dhawaaqyo iyo kala duwanaansho loogu talagalay soo saarida dhawaaqa, oo guji ellipsis ka dib erayga ah "Sawirka Alarm" si aad u doorato galka iyo bareegyada si toos ah loogu soo qaado.
Qaylo-dhaantu waxay taageertaa faylka codka loo habeeyay, hadda kaliya waxay taageertaa faylka kombiyuutarka ee PCM-ga ah ee WAV.
Haddii "Alarm Photo" la hubiyo, sawirka ka muuqda waxaa laga soo bandhigi doonaa dhinaca midig ee software-ka isla waqtigaasna waa la soo bandhigi doonaa. Guji sawirkan si aad ugu daawato barnaamijka 'Win10 software'.
Riix astaanta qaabeynta geeska kore ee midig, isticmaaleyaashu way isku habeyn karaan hoosta,
Qaybta heerkulka: Celsius ama Fahrenheit.
Habka Cabbiraadda: Aqoonsiga wajiga ama Qaabka guud
Madowga Shucuurta: 0.95 ama 0.98
Shahaadada DP-32 CE ayaa hoos lagu muujiyey,
Shahaadada FCC ayaa hoos lagu muujiyey,
Hore: Kameradda sawir-qaadaha ee DR-23 ee infrared
Xiga: CA10 PCB Wareegga guddiga falanqeeyaha kuleylka
Kameradda sawir-qaadaha ee DR-23 ee infrared
# 618, B Block, IOT Industry Park, Shenzhen, Shiinaha